Xog: RW Kheyre oo marti qaad ka helay dal qalalaaso Siyaasadeed ka dhex dhaliyay DF iyo Maamulada - Caasimada Online
Home Warar Xog: RW Kheyre oo marti qaad ka helay dal qalalaaso Siyaasadeed ka...
Xog: RW Kheyre oo marti qaad ka helay dal qalalaaso Siyaasadeed ka dhex dhaliyay DF iyo Maamulada
Muqdisho (Caasimada Online)-Warar hoose oo aan ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhawaan Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre uu booqan doono dalka Imaaraadka Carabta.
Ilo wareedka aan xogtaan ka helnay ayaa sheegaya in Ra’isul wasaare Kheyre uu warqada Casuumaada ka gudoomay Danjiraha dalka Imaaraadka u fadhiya Somalia Maxamed Axmed Othman Al Hammadi, oo ay wada kulmeen.
Casuumaada loo sameeyay Ra’isul wasaare Kheyre ayaa salka ku heysa wadahadal laga galaayo xiisada ay dowlada Imaaraadka ka dhex abuurtay dowlada Somalia iyo Madaxda maamul Goboleedyada oo aan weli loo helin xal rasmi ah.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa inta uu ku guda jiro gudashada casuumaadiisa kulamo la qaadan doona Madaxda ugu sareysa dowlada Isutaga Imaaraadka Carabta oo ay kawada hadli doonaan faragalinta ay weli Imaaraadka ku heyso Somalia, Weerarkii Senetar Qeybdiid iyo in dowlada Imaaraadka ay Somalia ula dhaqanto sida dal u madaxbanaan Siyaasadiisa.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa dhawaan Xafiiskii magaalada Muqdisho kula kulmay Danjire Maxamed Axmed Othman Al Hammadi oo ku wareejinaayay warqada casuumaada.
Dhinaca kale, casuumaada loo sameeyay Kheyre ayaa kusoo aadeysa xili uusan wanaagsaneyn xiriirka dowlada Somalia iyo Imaaraadka, waxaana la filayaa in socdaalka Kheyre uu noqdo maalmaha soo socda.